Jamboard: Inoshanda 4K Ratidziro Yakabatana neGoogle Apps | Martech Zone
China, December 7, 2017 China, Gumiguru 1, 2020 Douglas Karr
Hazviwanzo zvakanyanya kuti ini ndinyore nezve Hardware, asi gore rapfuura cohosting iyo Dell Mwenje Podcast yakanyatso kuvhura maziso angu kune kukanganisa kune Hardware ine pane kugadzirwa, kugona, uye hunyanzvi. Kunyange isu tichigara tichipinda mukati nekunze kwesoftware zuva rega rega - iyo hardware iri mugore uye padhesiki redu iri kushandura masangano edu futi.
Nekukura kwemasimba ekushandira ari kure, kubatana kwekure kure kuri kuve kuri kudikanwa - uye G Suite iri kupindura na Jamboard. Jamboard chiratidziro che4k chinoita kuti zvikwata zviveke mazano avo, kudonhedza mifananidzo, kuwedzera zvinyorwa, uye kudhonza zvinhu zvakananga kubva pawebhu iwe uchibatana nenhengo dzeboka kubva chero kupi. Zvakanakisa pane zvese, yako iri kure simba inokwanisa kushandisa maJardards mazhinji kana iyo Jamboard app pafoni kana piritsiAndroid or iOS).
Iyo Jamboard sevhisi allowed G Suite maAdmin ekugadzirisa avo Jamboard zvishandiso, uye inogonesa vashandisi veG Suite kusangana nejamu zvemukati pane zvavo runhare, piritsi, kana pane iyo dandemutande. Mumavhiki anotevera, sevhisi yeJoard ichave yepakati G Suite sevhisi.
Google yainyatsofunga nezvese zvinhu, kubva pakona yakareba kamera, mamaikorofoni akawanda, ichibvumira gumi nematanhatu ekubata mapoinzi, kunyora nemawoko kuzivikanwa, uye kunyangwe kusanganisira chinyoreso uye eraser izvo zvisingade pairing.
Jamboard inotanga paUS $ 4,999 (inosanganisira 1 Jamboard kuratidza, 2 styluses, 1 eraser, uye 1 wall mount) pamwe neUS $ 600 pagore manejimendi manejimendi uye mari yekutsigira.
Tarisa Jamboard Dhawunirodha Jamboard Specs
Tags: 4kkubatana kuratidzwaG SuitegoogleiosjamboardMobile Anwendungpiritsi